Baarlamanka Puntland oo arrinta macsharadda dhoofka xoolaha su’aalo ka weydiiyay wasaaradda – Kalfadhi
Gudoomiyaha guddiga dhawrista deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiillada Puntland Xildh. Fu’aad Abshir Adeer iyo xubno ka mid ah guddigiisa ayaa la kulmay wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xannaanada xoolaha Puntland.
Su’aalaha muhiimka ah ee ay guddigu wasaaradda wax ka weydiiyeen ayaa lagu sheegay in ay khuseeyeen ilaha dhaqaalaha sida maxsharrada dhoofka xoolaha ee Puntland, sida lagu yiri war ka soo baxay baarlamanka.
In kastoo aan faahfaahin ku filan laga bixin nuxurka kulanka maanta ee labada dhinac.
Khilaafkii gacanka khaliijka ee sannado ka hor iyo collaadda Yeman ayaa saamayn xoog leh ku yeeshay dhoofka xoolaha ee dalka, maadama inta badadan xoolaha Soomaaliya loo iibgeeyo Sucuudiga iyo dalalka kale ee gacanka.
Waxaa kaloo guddigu warbixin khusaysa caafimaadka, horumarinta iyo dhoofka xoolahaba ay ka dhegeysteen wasaaradda xannaadaha xoolaha Puntland. Arrimaha caqabadaha iyo fursadaha ayaa labada dhinac isla eegeen.
Bidix Wasiirka Xannaanada xoolaha Puntland Siciid Fiisigis iyo Agaasimaha guud ee wasaaradaas Dr. Ibraahim Xareed Cali /Baarlamanka
Guddiyada kala duwan ee golaha wakiillada Puntland ayaa weli ku hawlan kulamo isugu jira is-barasho iyo is-afgarad wada-shaqayneed oo ay la yeelanayaan hay’adaha ay korjoogtaynta ku leeyihiin ee xukuumadda.
Guddiga cusub ee dhawrista deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah oo la dhisay bishii febraayo ayaa hawl bilaabay horraantii Abriil, goortaas uu xirmay kalfadhiga 43aad ee golaha wakiillada Puntland.
Guddigan ayaa ka mid ah 10ka guddi ee golaha wakiillada Puntland.
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo ku taliyay in Ciidamada Kenya dalka laga saaro